Na-eduzi usoro SEO na SEM ọhụrụ maka azụmaahịa dị n'ịntanetị | ECommerce ozi ọma
ECommerce ozi ọma | | SEM, SEO
Maka azụmahịa ọ bụla n'ịntanetị ọ dị mkpa ịnweta ezigbo SEO na ọnọdụ SEM iji nwee ọnụnọ dị ukwuu na weebụ. N'ihi ya, ọ bụ ezie na ha abụọ bụ isi mgbe ọ bịara inweta visibiliti na ịntanetị, enwere ụfọdụ ọdịiche dị mkpa n'etiti ha. Yabụ, ebe SEO (Search Engine Optimization) bụ ọzụzụ na-elekọta ebuli ọnọdụ nke ebe nrụọrụ weebụ na ngwa ọchụchọ, SEM (Search Engine Marketing) bu uzo atumatu iji nweta nhazi site na akwụ ụgwọ mgbasa ozi.
Maka nke a, nyere mkpa ọ dị, ụfọdụ ụlọ ọrụ pụrụ iche na-enyocha kwa afọ na SEO na SEM kwa afọ. Nke a bụ ikpe, dịka ọmụmaatụ, nke eStudio34, nke ka bipụtara ụzọ SEO na SEM na-eduzi 2020.
1 Ọnọdụ SEO maka 2020
2 Ọnọdụ SEM maka 2020
Ọnọdụ SEO maka 2020
La Ntuziaka SEO na-ewu maka 2020 akọwaputa, n'ụzọ dị otú a, ụfọdụ n'ime ike nke ịdọ aka ná ntị a na-atụ anya n'afọ ọzọ. Ya mere, nke mbụ, onye ndu ahụ gosipụtara mkpa ọ dị iji data ahaziri iji nweta nyocha na-enweghị isi, metụtara ajụjụ ndị ọrụ emere site n'olu.
Na mgbakwunye, ntuziaka na-egosiputa mkpa ọ dị mepụta ọdịnaya mpaghara iji rite uru na arụmọrụ ụfọdụ nke algorithm mpaghara. N'ihi nke a, onye ndu ahụ na-atụ aro ka ị jiri ọtụtụ njikọ njikọ ọchụchọ mpaghara. N'otu aka ahụ, akwụkwọ ntuziaka ahụ na-egosipụtakwa mkpa ọ dị wepụ data iji mata mkpa na ụtọ ndị ahịa nwere ike ịdabere na mmejuputa ọmụmụ mmụta asụsụ.
N'otu aka ahụ, onye ndu ahụ na-adụ ọdụ maka iji akụrụngwa maka ịhazi ọtụtụ data. N'ihi ya, akwụkwọ a na-atụ aro iji Jupyter: ihe eji eme ihe machiini otutu usoro jikọtara na njikwa data.
N'otu aka ahụ, Trendszọ ndị ọzọ dị na ndu a metụtara imeziwanye nkwukọrịta n'etiti ndị ahịa n'oge usoro ịzụta na iji data tozuru oke maka ịme mkpebi..
Ọnọdụ SEM maka 2020
Na Ntuziaka SEM maka 2020 a na-ekwu okwu, na ihe ndị ọzọ, nke Igwe ihe igwe, nke na-enyere okike na ntinye nke 100% mgbasa ozi mgbasa ozi na-akpaghị aka. N'otu ụzọ ahụ, SEM omume ndu na-agụnye ụfọdụ n'ime isi ozi ọma nke Google Mgbasa ozi esighi na 2020. Ya mere, dị ka onye ndu ya, ihe ndozi ndị a ga-abụkarịrị na nnukwu akpaaka na ụdị okike ọhụrụ.
N'otu ụzọ ahụ, onye ndu ahụ na-etinyekwa ụfọdụ ọhụụ n'ọhịa nke SEM n'ihe metụtara ọkwa akpaaka na ngwa ọgụgụ isi. N'otu aka ahụ, ọ na-arụtụ aka na ọdịdị nke usoro mgbasa ozi ọhụụ dịka mgbasa ozi gallery, mkpọsa nchọpụta na ndọtị yana ụdị ụzọ. Ha niile usoro ohuru nke ga - eme ka ikike iru ahịa na arụmọrụ nke mgbasa ozi mgbasa ozi nke azụmaahịa dị iche iche mepụtara site na ịntanetị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » SEO » Na-eduzi usoro SEO na SEM ọhụrụ maka azụmaahịa ndị dị n'ịntanetị